Ugbo, nri na njem nleta: Nchikota mmeri na Solomon Islands
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Solomon Islands » Ugbo, nri na njem nleta: Nchikota mmeri na Solomon Islands
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Solomon Islands • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ministri nke Ugbo na Anumanu na mpaghara ndi njem na Solomon Islands nwere mmasi ijiko oru ugbo na njem nleta site na nri.
N'ime nzuko ogbako na nso nso a, MAL na ndị mmepe mmepe gosipụtara ọrụ ndị siri ike na ijikọta ọrụ ugbo na njem, na-agbakwunye na nke a kwesịrị itinye ya na iwu agritourism.
Chef Colin Chung, a ma ama n'ofe Pacific maka nkà na nkwado ya maka ịkọwapụta mpaghara, kọwara ohere maka njem nri na Solomon Islands.
Maazị Chung kwuru na enweela akụkọ gara nke ọma gbasara mkpa ọrụ ndị siri nri gafee Pacific, ọkachasị Fiji, gbasara ọrụ ugbo na njem nlegharị anya.
“Na mgbakwunye na ịkwado ngbasawanye nke onyinye njem nlegharị anya nke mba ahụ, nri ndị njem na-akpali akpali pụkwara ịkpali agụụ maka nri ndị obodo na ngwaahịa sitere n'aka ndị ọrụ ugbo.
"Otu nnukwu ihe ịma aka nke Solomon Islands ga-edozi bụ ikike dị na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri, ebe ọ bụ na mba ahụ nwere nanị ndị ọkachamara siri nri ole na ole ugbu a."
Ọrụ si Solomon Islands Visitors Bureau Mrs Freda Unisi kwuru, "Ndị njem na-achọ ka a nụ ụtọ nri ndị anyị na-eri na mpaghara ha na obere nleta ha, mana na anyị enweghị ndị isi ọrụ, ọ nweghị mpaghara menu nke a ga-ere ndị ọbịa anyị."
O nwere olile anya na Iwu Agritourism ga-eleba nke a anya.
CTA, SPTO na PIPSO na-akwado mmepe ikike nke ndị chefs gafee mpaghara ahụ ma na-akwalite mgbanwe nke ahụmịhe na omume kachasị mma site na Chefs ha maka ikpo okwu.
Onye njikwa CTA na onye nhazi Isolina Boto kwuru, "Anyị kwenyere na ndị ọkachamara nwere ike ịbụ ndị na-akwalite nri na nri mpaghara, ma soro ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ iji melite ogo nri nke ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ụlọ nri."